| တရုတ် 50ml 250ml rectangular လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူးပေးသွင်း canted နှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း Ama
ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကောင်းသောစျေးနှုန်းပလပ်စတစ် eppendorf Filler ...
ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ပလတ်စတစ် Micro နဲ့ Pipette သိကောင်းစရာ
Lab မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်းပလပ်စတစ်တစ်ခါသုံးမြုံဖန်မီတာ ...
ပလပ်စတစ် 1ml 1.5ml 1.8ml 5ml 6ml 10ml cryo ပြွန်
ဝက်အူ Cap နှင့်အတူပလတ်စတစ် 15ml Laboratoty centrifugal Tube
အရည်အသွေးမြင့်မားတစ်ခါသုံးမြုံ 70mm Petri ပန်းကန်အဆက် ...
နားကိုအတူ 75mm တစ်ခါသုံးဓာတ်ခွဲခန်း Petri ပန်းကန်
က ISO & အီးတစ်ခါသုံးပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ဖန် 150m အတည်ပြု ...
လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular
ဓာတ်ခွဲခန်း Bottle သ
50ml 250ml rectangular canted လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး
25ml, 50ml, 75ml, 250ml, 600ml Insight web studio ၏
100% ကညာ polystyrene ဆဲလ်တစ်သျှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး၏လုပ်
Gamma ရောင်ခြည်, အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်, ခရမ်းလွန်ပိုးသတ်
နေ့ဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်ဆဲလ်တစ်သျှူးယဉ်ကျေးမှုဘူးနှုန်း 50000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
စာသားမပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့် "မဝယ် လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular"
cell ထုတ်ကုန်အဓိကအားပါဝင်သည် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုပန်းကန် , ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုပန်းကန် နှင့် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုပုလင်း သည့်ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့်စတိုင်အပြည့်အဖြစ်ကြဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး ထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်ပရိုတိန်းထိစိမ့်, TCT / အောက်စီဂျင်ပလာစမာများနှင့် Hybrid ကိုပလာစမာအဖြစ်, နည်းပညာပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်ဖို့, Collagen with.The ကိုင်တွယ်ရန် cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး ဆဲလ်ရပ်ဆိုင်းမှုယဉ်ကျေးမှုနှင့် Stick မှအထောက်အကူဆဲလ်ကြီးထွား environment.More တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ် နံရံတစ်ခုဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု။ cell ယဉ်ကျေးမှုပုလင်း အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဘဲဆဲလ်ပြန့်ပွားအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး လည်းရှားပါးနမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုနည်းပညာနှင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး, တိုက်ရိုက်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အီးမေးလ်: 18863608211 (@ 163.com) ။ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုဆက်သွယ်စာသားပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန် " လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းအသင်းရှိနေကြသည်, အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
cell ယဉ်ကျေးမှုဘူးfrom.Our ရွေးချယ်ဖို့နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးရှိ ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူးနည်းပညာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် R & D အဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမြောက်အများအတွက်မဝယ်နိုင်, ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အေးဂျင့်စုဆောင်း
မဝယ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ " လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular"
25ml ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု ဘူး
25ml cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး(breathable ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး)
50ml cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး
75ml cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး
75ml cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး(breathable ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး)
250ml cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး
600ml cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး
" လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့်တည်းကကုသမှုမရှိဘူး options နှစ်ခုရှိသည်။ cell ယဉ်ကျေးမှုဘူးရပ်ဆိုင်းမှုယဉ်ကျေးမှုဆဲလ်များနှင့်နံရံတစ်ခုဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုကပ်ထားပါနိုင်ပါတယ်။
cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး အထူမျက်နှာပြင်ချောမွေ့ဖြစ်ပါသည်, ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ " လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" တံဆိပ်ကိုအဖုံးများနှင့်အမြှေးပါးအဖုံးနှစ်ခုသတ်မှတ်ချက်များရှိပါတယ်။
အဆိုပါအမြှေးပါးအဖုံး၏ breathable တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး.
၏တိကျသောလိမ်လည်ပင်း ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး ထုပ်အနေအထားသို့လျှင်မြန်စွာလှည့်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး လည်ပင်း Angle အတွက် pipette လွယ်ကူစွာစေသည်။
၏ကြိတ် arenaceous ဧရိယာ ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး လည်ပင်းကိုအလွယ်တကူမှတ်သားသည်။
၏ပစ္စည်းကို " လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" ps ဖြစ်ပါတယ်။
၏အထက်တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး နေရာချထားတည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
cell ယဉ်ကျေးမှုဘူး ထိရောက်စွာအာကာသချွေတာ, stacked နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့မှတပါးအခြားထုတ်ကုန်များရှိ " လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" .You need medical supplies and lab supplies to contact me directly.
" လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" စတာတွေ, ဓာတုဓာတ်ခွဲခန်း, ဆေးရုံ, မိသားစု, ကျောင်းမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
Qingdao jindian, ၎င်းတို့၏အပျနှံဖို့ကျေးဇူးတင်စကားသုတေသီတစ်ဦးအခွန်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
Qingdao AMA Co. , Ltd မှ။ 1992 ခုနှစ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ထိုင်ဝမ်ဌာနချုပ်မှာနှင့် Qingdao အတွက်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းခဲ့သည်။ ဒါဟာ products.AMA တင်းကျပ်အတွင်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏တစ်ဖွဲ့လုံးအစုံစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ISO9001, ISO13485 နှင့်အီးခွင့်ပြုချက်လွန်ပြီတစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြုပါတယ်။
AMA ကြီးမြတ်အောင်မြင်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ: ဒါဟာရဲ့ လေဟာနယ်, အသွေးပြွန် ,စမ်းသပ်ပြွန် ,Petri ပန်းကန်,ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဘူး များနှင့် တစ်သျှူးယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားအထူးသဖြင့်အမေရိကန်, ဂျပန်နှင့်ဂျော်ဒန်ဈေးကွက်ထဲမှာပျော်မွေ့နေကြသည်။
ငါ့ကိုသင့်လိပ်စာပေးပို့ပါ။ ကျနော်တို့ကယ်နှုတ်မည် " လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" သင်တို့လက်သို့တိုက်ရိုက်။
Professional ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းအဆက်အသွယ်သင်၏ဝယ်ယူမှုသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးကူညီကြလိမ့်မည် (@ 163.com) 18863608211 အကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက် " လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဘူး canted 50ml 250ml rectangular" .
အီးမေးလ်: 18863608211 [@] 163.com
ဆက်သွယ်ပါ 18863608211 [@] 163.com for more products.
နောက်တစ်ခု: လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုပုလင်းဘူး canted 50ml 250ml rectangular
90mm X ကို 15mm ပိုး Petri ဆဲလ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုဟင်း
တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပလပ်စတစ် 96 ကောင်းစွာတစ်ရှူး cultu ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်းပလပ်စတစ်တစ်ခါသုံး 24 ကောင်းစွာတစ်ရှူးက c ...
ဓာတ်ခွဲခန်းဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုပုလင်း t ...
50ml 250ml rectangular လည်ပင်းဓာတ်ခွဲခန်း p canted ...
AMA ဓာတ်ခွဲခန်း Consumer6ကောင်းစွာဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုပန်းကန်
ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခါသုံးမြုံ 96 ဝဲလ်ဆဲလ် Tiss ...
အမှတ် 398E-5, Jiaozhou အနောက်လမ်း, Zhongyun 2nd စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, Jiaozhou, Qingdao, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်